IAddsense kaGoogle yokondla | Martech Zone
IGoogle Adsense yoKondla
NgoMgqibelo, Agasti 4, 2007 NgeCawa, Agasti 19, 2007 Douglas Karr
Xa ukutya kuvula kwaye kwenza isicelo somfanekiso, uGoogle uguqulela ngamandla umfanekiso kubhabho. Oku kufuneka kwenziwe ngale ndlela ukuze ukwazi ukulawula uhlahlo-lwabiwo mali loMthengisi. Ngamanye amagama, ukuba ndinohlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 100- xa ndisebenzisa uhlahlo-lwabiwo mali, kufuneka kusetyenziswe enye intengiso yomntu olandelayo ovula ukutya.
Inye into enomdla kukhetho lweBlogger okanye uhlobo olushukumayo. Kutheni le nto kukho naziphi na iingxaki kwiqonga elithile? Ngaba zikhona iingxaki? Kubonakala ngathi le teknoloji inokwandiswa nakweyiphi na indawo enikwe amandla i-RSS. Ngokubhekisele kuGoogle, akukho kuninzi kakhulu ulwazi olufumaneka kwindawo yabo.
Ndijonge ukutyikitya iAdsense yeeFeed xa ifumaneka. Ukuba unolwazi olongezelelweyo-nceda unike ingxelo ngezimvo.
Izinto ezisibhozo ongazaziyo ngam
Martech ZoneInqanaba # 1 kwiTechnorati